Looks Nepal पानी प्राण हाे । एक थोपा रगत र एक मुठ्ठी सास रहेसम्म न्यायका लागि लडी रहन्छौँ : विशेश्वर बञ्जारा – Looks Nepal
May, 2, 2020	looksnepal
विगत लामो समय देखि आफु राजजनितिक कर्मी भए पनि नागरिक समाजको रुपबाट काभ्रे तथा पनौती नगर भित्रका सामाजिक सराेकारको सावालहरु र अधिकारको विषय निरन्तर लाग्दै आउनुभएको व्यक्ति हाल नागरिक सरोकार समाजको संयोजकको रुपमा समाजका बिकृती बिसंगती विकास संवृद्धिका कुराहरुलाई उठाउंदै र समाधानका पाटाहरुपनि पस्कदै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ : विशेेेेेश्वर बन्जारा, वहाँ संग हामीले गरेको कुराकानीहरु पस्कने जमर्को गरेका छौ ।
आजकाल कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महमारीको समयमा जसरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ म पनि त्यसबाट अछुतो छैन । घरमा बस्ने, सकेको समाजमा सामाजिक काम गर्ने अनि यस महामारीले निम्त्याएको असहज परिथितिलाई भोलीका दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मै तल्लिन छु ।
तपाई समाजिक कार्यकर्ता, नागरिक सरोकार समाजको संयोजक पनि, तपाईहरुले उठाउदै आएको सामाजिक न्यायको कुरामा कतिको प्रगति भएका छन ?
धेरै कुराहरुमा प्रगतिहुँदै छ, तपाइले इङगति गर्न खोज्नु भएको कुरा चाँहि के हो प्रष्ट सोध्नुहोस न ।
तपाईंहरुले धेरै विषयहरुमा कुरा उठाउदै आउनु भएको छ । तर अहिलेको हाम्रो कुरा चाँहि के हो भने हाल सालैको काभ्रे उपत्यकामा एकिकृत खानेपानिको हो, यस सम्बन्धि कुराहरुमा चाँहि तपाईहरुले कत्तीको सफलता प्राप्त गर्नु भयो त ?
हो यस्तै ठोस कुरा राख्नुस न । प्राप्त हुदै छन् हुन्छ भन्ने विस्वासमा छौ । आयोजनामा र त्यसबाट लाभान्वित हुने तिनवटै नगरपालिकाहरुले हाम्रो कुरा अवस्य बुझ्नु भएकै छ र मनन पनि गर्नु भएकै होला ।
अनि हालसालै पानी त परिक्षण भयो नि त । तपाईहरुको माग सम्बोधन भयो त ?
पानी परिक्षण भयो । मुहानबाट मुख्य ट्याङकि सम्म पानी खसालेर हेरेको मात्र हो । हामीले पनि मुख्य पाईपलाईन र वितरण लाईनकाे पाईप टेष्टिङकाेे लागीनै पर्खी रहेका थियौ । यदि त्यसो गर्न पनि नदिएको भए हामी माथी ठुलै आरोप लगाउने थिए । केही सामान्त अधिनायकबादीहरुले हामीलाई पानी बिरोधी बनाईरहेका थिए, तर हामी तिनिहरुले भने जस्ता थिएनौ । त्यसैले हाम्रो मागहरु पुुरा हुने आशामा यी सबै कामहरु अगाडी बेढेका हुन ।
पानि त टेस्ट भयो अब वितरण पनि हुन्छ, तपाईहरुले उठाउदै आएको कुरा पुरा हुन्छ त ?
अवस्य पनि पुरा हुनु पर्छ । हामी नागरिक सरोकार समाजले उठाउदै आएका कुराहरु हाम्रो निजी होईनन। सबै तीनवटै नगरका कमाण्ड एरियाका जनाताहरुकै हो । त्यसले धुलिखेल बनेपा र पनौतीका नागरिकहरु सबैलाई न्याय हुन्छ र पानी प्राप्त हुन्छ ।
न्याय र समानता भएको छैन भन्नुहुन्छ, कसरी भयो असमानता र अन्याय ? कतै पानी नदिने त भन्नुभा हैन ?
हामीले पानी नदिने त भनेकै छैनौ । पानी मानिसको प्राण हो । हामीले तीनवटै न.पा का बासिन्दा बराबर हो र सबैले बराबर पानी उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भनेका हौँ। त्यसले बनेपा र धुलिखेलका जनातालाई पनि दिर्घकालिन फाईदा गर्छ । असमानता छैन भन्नुको कारण के हो भने साविक पनौती न.पा. र बनेपा न.पा. भित्र स्थानिय श्रोत समेत गरेर ३६ हजार पनौती, ३६ हजार बनेपाका जनतालाई ३५ र ३६ लि. प्रति सेकेण्ड पानी दिने र तर धुलिखेलमा भने साविक धुलिखेलले खाँदै आइरहेको पानी र धुलिखेल भित्रको स्थानिय श्रोतहरुको पानी प्रति सेकेण्ड १४.७१ लि. र ४ लि जम्मा १८.७१ लि. साथै पुरानो मुहान खारखोलामा आयोजनाको निति विपरित ६ इन्च पाईपबाट बढाई १० इन्च पाईप थप गरी पूनः ७ लि जती पानी बढाई हाल लगभग २४ लि पानी उपभोग गर्दै आइरहेको साथै आयोजनाको थप १९ लि. हुँदा प्रति सेकेण्ड ४३ लि. हुन आउँछ भने जनसंख्या २० हजार मात्र हुन्छ, अब भन्नोस ३६/३६ हजारलाई ३५ र ३६ लि प्रति सेकेण्ड भने २० हजारलाई ४३ लि. कसरी समान र न्यान भयो ? त्यसैले यसको उचित निकास भनेको जनसंख्या हिसाब गरी समान पानी वितरण नै हो ।
तपाईहरुले गर्दा पानी नै नआउने भयो भन्ने हल्ला छनीत ?
हो यस्तै हल्ला भयो भनेर हामीले सबैले सहजै पानी खाने बिकल्प र उपाय सहित प्रस्तुत भएको हौँ र ती भोलिका दिनमा पनि कतै आयोजनालाई डिस्टर्व नहोस भन्ने उपाएका साथ उठाएका कुराहरु हुन । बुझ्नेहरुले हाम्रो कुरा बुझेर समर्थन गर्नु हुन्छ । बुझेर पनि बुझपचाउनहरुले हामीलाई पेलेर लुटेर भए पनि आफ्नो अभिष्टता पुरा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।
के के हुन त तपाईहरुका मागहरु ? ति पुरा भएनन् भने के गर्नुहुन्छ ।
मैले पहिल्यै पनि भनिसकेँ हाम्रो मागहरु भनको सबैको हित हुने नै हो र अवस्य पुरा हुन्छ । हामी पनौतीका बासिन्दा भएको हुँदा हामीले यस पनौतीलाई आफ्नो आमाको दर्जामा राखेको छौ र यस पनौतीको हितको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन्छ । तर पनि पानी सबै प्राणीको प्राण हो भन्ने बुझेेर नै पनौती बनेपा र धुलिखेलका सबै नागरीक समान हुन र समान उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भनेका हौंं र हामीले विगत देखि उठाउदै आएका कुराहरु केही केही आयोजनाले कार्यान्वयन गर्दै छ, केही बोर्डले र केही राजनैतिक नेतृत्व तह बाट पुरा हुनु पर्ने कुराहरु बाँकी छन् ।
ति कुराहरु के के हुन र पुरा भएनन् भने के गर्नुहुन्छ भनेको हो नि त ?
अब बाँकी पुरा गर्नु पर्ने हाम्रो आम पनौती बासीको मागहरुमा :-
१. अहिले धुलिखेलको पुरानो पानी समयोजन गर्ने कुरा शिद्घान्तमा मात्र सिमिति छ । त्यो व्यवहारीक रुपमा नै समायोजन हुनु पर्छ र पनौती, बनेपा, धुलिखेलका आम नागरिकहरुलाई अनुभुती गराउनु पर्छ भनेका हौँ ।
२. आवस्यकता, उपयोगिता र मानब मानब बराबरको सिद्घान्तका आधारमा तीनवटै नगरका उपभोक्ताहरुलाई जनसंख्या हिसाब गरी समानुपातीक पानी दिनु पर्छ भनेको हौँ ।
३. पनौती खोपासी फाँट र रोसी खोलाबाट आश्रीत सिँचाई हुने सवै जमिनहरुमा सिँचाई सुविधा निरन्तर गर्न तथा खोलामा रहेने जलचर, थलचर, गाई भौसी तथा अन्य जनावरहरुलाई समेत पानी उपभोग गर्न सँधै उपलब्ध गराउनका लागि यस आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा चेक ड्याम बनाई पानीको जलासय निर्माण गरी बकैल्पिक व्याबस्था गर्नु पर्छ भनेका हौ र यसले एग्रो टुरिजम र आन्तरिक टुरिजम समेतको संमावना बढाउने समेत भनेका छौँ ।
४. हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण माग के हो भने पनौती, बनेपा र धुलिखेलको सिमानाको समस्या समाधान हो । यसमा हामीले उठउिदै आएको कुरा साविक सुब्बागाउको २ नं वडा साविक पनौती न.पा.को २ नं. वडाको श्रीखण्डपुर देखि धनेश्वर सम्मको क्षेत्र नै हो । त्यो क्षेत्र पनौती न.पां गठन हुँदाका बखत नेपाल सरकारको बजेट तथा राजपत्रमा उल्लेख भएको सिमाड्ढन सम्बन्धि निर्णय अनुसार जे छ त्यो भएमा हामी मान्छौ भनेका छौँ । सविक धु.न पा बन्दा बनेपा देखि आर टि ओ रोड हुदैँ श्रीखण्डपुर चोक उकालो सम्म आर टि ओ रोड दखि सुब्बागाउँ तिर उत्तर पश्चिम पट्टिको केही भाग भन्ने रहेको छ र त्यो भनको प्राकृतिक सिमाना पुन्यमाता खोला सम्म मात्र हो । तर धुलिखेलेले धुलिखलेका नागरिकहरुको जग्गा सुब्बागाउ पट्टि भएको ले त्यो भूमि धुलिखेलकै हो भनेकाेे हाेे । त्यसैले त्यो पनौतीको भुमि नै भएको हुँदा पनौतीकै कायम हुनुपदर्छ भनेका हाैैं त हामीले ।
अब यो हाम्रा कुराहरु पुरा गराउनु मुख्य भुमिका खेल्नु पर्ने पनौती न.पा ले हो । पटक पटक पनौती न.पा. संग र जनप्रतिनिधिहरु संग हामीले यी कुराहरु प्रस्तुत गरी सकेका पनि छौँ र व्यापक छलफल पछि न.पा ले पनि स्पष्ट दृष्टीकोण बनाई सकेको छ कि यो नागरिक समाजले उठाएका सवालहरु जायज हुन र पुराहुनुपर्छ भन्ने नै छ । तर किन हो ढिला भई रहेको छ । यदि हाम्रा मागहरु पुरा भएन र पानीमा जवरजस्ती गर्ने कुरा भयो भने न्याय र अधिकारको लाग्गी हामीहरु जुन सुकै परिस्थितीको पनि सामना गर्ने छौँ ।
त्याे भनेको के हो ?, कहिले सम्म पुरा हुन्छ र तपाईहरुको राम्रो कुरालाई कस्ले चाहिँ नटेर्ला र ?
न्यायको, समानताको, स्वाभिमानको र अधिकारको लागि विगतमा राज्य विद्रोह भए जस्तै हाम्रो सहनसिलताको धैर्यको बांंध फुट्यो भने कल्पना गर्नोेस न के होला । हामी पनौती आमा र यहाँ भित्रका प्राणीको अधिकार रक्षा गर्नको लागी बलिदानी दिन पनि सक्छौँ । एक चोटी जानै पर्ने ज्यान त हो हैनर ¤ को चाँहि सँधै अजम्वरी रहन्छ र ¤ हामी एक थोपा रगत र एक मुठ्ठी सास रहेसम्म न्यायका लागि लडी रहन्छौँ अनि भोलिका सन्ततीले यसको मुल्याड्ढन गर्लान ।
बाफरे तपाईले त साह्रै भन्नु भो, कस्लाई इङ्गित गर्नु भएको हो र ?
मैले व्यक्ती तोकेर कसैलाई पनि भनेको होईन । यो नियत र प्रवृत्ती खराब भएकाहरुलाई हो । हामीलाई बुझरे पनि बुझ पचाएर पेल्ने, हेप्ने समान्ता अधिनायकवादी तानाशाहीहरु र त्यसका दलाल अनि नोकरशाही गुलामहरुलाई हो । पनौती र पनौतीका जनताको माया नहुनेहरुलाई हो । यदि पनौती आमा र त्यसका सन्ततीहरु प्रती इमान्दार र स्वाभिमानी हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो अभियानमा साथ अवश्य पनि दिनुहुनेछ ।
तपाईं पनि कुनै राजनैतिक विचार बोक्ने नेता हैन र ? पार्टीले कार्वाही गर्लानी ?
राजनिती गर्ने नै समाजको लागि हो, दलाली गर्नको लागि हो र ? समाज परिर्वतन बिकास रुपान्तरण र यसका जनतालाई सुख सान्ती सम्वृद्घी दिलाउनका लागि हो । कुनै अपराध गर्न भ्रस्टचार गर्न र देश बेच्नका लागि हैन । त्यसैले मेरो पहिलो दायित्व आफ्नो पहिलो आमा जननी जन्मभुमि पनौती आमाको अस्मिता जोगाउन लाग्नु हो, त्यसपछि यहाँका उनका सन्तानको अधिकार र रक्षाकालागि लाग्नु हो। अनिमात्र मेरो विचार र पार्टिका लग्गी लाग्ने हो । विचार र पार्टी मात्र मेरो लागि होइन समाज, देश र सामाजिक प्राणीका लागि हो, त्यसैले राजनिती तेश्रो कुरा हो, पहिलो आफ्नो माटो मातृभुमी र दोश्रो आम नागरिक अनि मात्र राजनिति । कार्बाहिको डर त अपाराध गर्नेलाई मात्र हुन्छ, हामी न्याय समानता र स्वाभिमानका लागि निरन्तर लाग्ने लाई केको डर हामी त खुकुरीको धार र काँडै काँडामा टेकेर हिडेका छौँ र भोली पनि हिड्न तयार छौँ ।
अन्तमा केही बाँकी छन कि ?
बाँकी त धेरै छन तर समय अनुसार पुरा हुुंदै जान्छन र पुरा गर्नु पर्छ भन्ने विस्वास छ । पनौतीका दाजुभाई दिदीबहिनी र पनौतीका जनप्रतिनिधिहरु सबै प्रति अत्यन्तै विस्वास छ । सबैले हाम्रो यो अभियानको मर्म र भावना बुझनु हुने छ, बुझ्नु भएको पनि छ । यहाँका सबै सवालहरुमा समाधानको विकल्प हामी दिन सक्ने क्षमता राख्दछौँ । यो कुराको पनि विस्वास दिलाउन चाहन्छु । हाम्रो अबिभारा बोक्नु हुने पनौती न.पा. का मेयर आदरणिय भिम न्यौपाने दाई र उपमेयर गिता बन्जारालाई पुनः विशेष अनुरोध समेत गर्दछु कि यि हाम्रा कुराहरु यदि गल्ती भएमा हामीलाई साथ नदिनुहोस सहि लागेमा पूर्ण साथ दिनुहोस । हामी समाधानको आशा र विस्वास दृढ बनाई राख्ने छौ भन्दै सबैमा एक पटक हामीले उठाएको राम्रा कुराहारुलाई साथ र समर्थन गरी सहयोग गरी दिनुहुन हृदय भित्रै देखि अनुरोध गर्दछु । जय पनौती, जयनागरीक, जय मातृभूमि, धन्यवाद ।